Hordhac iyo adeegsiga mashiinka wax gubaya ee nooca mashiinka lagu ridayo | Ding Tai
Hordhac iyo adeegsiga mashiinka ololaya rasaasta rasaasta
Mashiinka duqeynta waa nooc ka mid ah teknolojiyadda daaweynta si ay u qarxiso ciid bir ah iyo bir bir ah oo dusha sare ka ah shey walax leh xawaare aad u sareeya oo ku shaqeeya mashiinka rasaasta lagu rito. Marka la barbar dhigo teknoolojiyadda kale ee daaweyn dusha sare, waa dhakhso badan, waxtar badan, qayb ahaanna way ilaalin kartaa ama feedhsiin kartaa hawsha kabka.
Shirkadaha Ameerika waxay samaysteen mashiinka toogashada ugu horreeya adduunka sannadihii 1930-meeyadii. Soosaarka Shiinaha ee qalabka duqeynta ayaa bilaabey sannadihii 1950-meeyadii, badiyaa nuqul ka sameystay tikniyoolajiyadii Midowgii Soofiyeeti hore.
Mashiinada rasaasta lagu ridayo ayaa waliba loo istcimaali karaa in lagu soo saaro burrs, cabirrada iyo miridhku ee wax u dhimaya sharafta, muuqaalka, ama qeexida qaybaha sheyga. Mashiinka rasaasta rasaasta wuxuu kaloo meesha ka saari karaa wasakhooyinka qeyb daboolan oo ay ku siin karaan muuqaal dusha sare ah oo kordhinaya isku dhejinta daboolka si loo xoojiyo shaqada.
Mashiinka wax duqeeya
Mashiinka rasaasta lagu garaaco wuxuu kaga duwan yahay mashiinka xawaaraha toogashada taas oo loo isticmaalo in lagu yareeyo nolosha daalka ee qaybta si loo kordhiyo walaaca dusha sare, kordhinta xoogga qaybta, ama looga hortago murugada.
Qalabka toogashada toogashada ayaa marka hore loo isticmaalay warshadaha kaynta si looga saaro ciidda dusha sare iyo maqaarka maadada birta ee birta ka sameysan iyo birta kabka.
Ku dhawaad ​​dhammaan biraha bir, xargaha cawlan, googooyaha birlagaanta ah ee la arki karo, gogo 'bir ductile iyo wixii la mid ah waa in la toogtaa. Tan kaliya maahan in meesha laga saaro maqaarka iyo hawo-weysada oogada sare, laakiin sidoo kale waa diyaarin howsha lama huraanka ah ka hor inta aan la hubin tayada baaritaanka. Tusaale ahaan, kahor kormeerka aan burburka laheyn ee tuubbada gaaska waaweyn, nadiifinta shucaaca dabka waa in la fuliyaa si loo hubiyo in lagu kalsoonaan karo natiijada baaritaanka.
Guud ahaan wax soo saarka kabka, nadiifinta rasaasta waa hanaan lagama maarmaan u ah in la helo cilladaha dusha sare sida gogosha maqaarka hoostiisa, godadka gogosha, ciid, qaboojinta qabow, diirka iyo wixii la mid ah.
Nadiifinta dusha sare ee birta birta ah ee biraha ah, sida aluminium aluminium iyo aluminiumka aluminiumka, marka lagu daro ka saarista maqaarka 'ogaydhka' iyo raadinta cilladaha dusha sare ee qalcadaha, ujeedka ugu weyn ayaa ah in toogasho la qaado si meesha looga saaro bur-buuryada u dhinta oo la helo tayo dusha sare leh muhiimad qurxin. , si loo helo natiijooyin dhammaystiran. Wax soo saarka birta iyo bir-ka-soo-saarka, toogashada toogashada ama jiidista waa qaab farsamo ama kiimikaad kiimikada looga saarayo maqaarka fosfooraska si loo hubiyo wax soo saar sareeya ee wax soo saarka birta.
Soo-saarista xaashiyaha bir-dahaarka ah, xaashiyaha birta-birta ah iyo taarikada kale ee birta ka sameysan ee biraha leh iyo xargaha, toogashada toogashada ama daweynta waa in la fuliyaa ka dib markii la diwaangaliyo habsami u socodka qaboojinta si loo hubiyo dusha sare ee dusha sare iyo saxnaanta saxanka taargooyinka bir duuban.
Farshaxannada si loo xoojiyo
Marka loo eego aragtida xoogga birta ee casriga ah, kordhinta cufnaanta ka saarida gudaha birta waa jihada ugu weyn ee lagu hagaajinayo xoogga birta.
Waxaa la caddeeyay in duqeynta toogashadu ay tahay farsamo wax ku ool ah oo lagu kordhiyo qaab dhismeedka kala-baxa. Tani waxay muhiimad weyn u leedahay qaybo ka mid ah biraha aan lagu adkayn karin isbeddelka wejiga (sida adkeynta martensite) ama u baahan xoojin dheeraad ah salka ku haysa adkeynta wejiga.
Duulista, warshadaha hawada, baabuurta, cagafyada iyo qaybaha kale waxay u baahan yihiin tayo khafiif ah, laakiin shuruudaha isku hallaynta ayaa sii kordhaya oo aad u sarreeya, tallaabada tikniyoolajiyada muhiimka ah waa in la adeegsadaa tikniyoolajiyad toogasho si loo wanaajiyo xoogga iyo xoogga daalka ee qaybaha.
Waqtiga boostada: Jul-18-2020
toogtay Mashiinka Peening, Shot Benty Turbine, Mashiinka Shot Benty, toogashada Qaybo ka mid ah Xaraashka, Shot Benty Wheel, Mashiinka ololka rasaasta, Dhamaan Alaabada